နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Teodoro L. Locsin, Jr. အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Teodoro L. Locsin, Jr. အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: မေ 23, 2019 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ဖိလစ်ပိုင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေး တက်ရောက် ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် ရောက်ရှိနေသော ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Teodoro L. Locsin, Jr.အား ယနေ့ မွန်းလွဲ(၃) နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဖိလစ်ပိုင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၌ အပြန်အလှန် အကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ် များကိုလည်း အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးနှင့် ဖိလစ်ပိုင်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဖိလဈပိုငျ သမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ဝနျကွီး H.E. Mr. Teodoro L. Locsin, Jr. အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ တတိယအကွိမျမွောကျ မွနျမာ-ဖိလဈပိုငျနှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲကျောမရှငျအစညျးအဝေး တကျရောကျ ရနျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံသို့ တရားဝငျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ ရောကျရှိနသေော ဖိလဈပိုငျသမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ဝနျကွီး H.E. Mr. Teodoro L. Locsin, Jr. အား ယနေ့ မှနျးလှဲ(၃) နာရီတှငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-ဖိလဈပိုငျနှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေး ကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။ ထို့ပွငျနှဈနိုငျငံအကြိုးစီးပှားဖွဈထှနျးရေးအတှကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေး၊ ဒသေတှငျးနှငျ့ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျး၌ အပွနျအလှနျ အကူအညီ ပေးရေးကိစ်စရပျ မြားကိုလညျး အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အစညျးအဝေးသို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီးဦးကြျောတငျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖိလဈပိုငျသံအမတျကွီးနှငျ့ ဖိလဈပိုငျအဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ